Ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra dia petra-kevitra izay milaza fa ny boky dimy voalohany ao amin' ny Testamenta Taloha izay mamorona ny atao hoe Pentateoka na Tôrah (ny Genesisy na Jenezy, ny Eksodosy na Eksaody, ny Levitikosy na Levitika, ny Nomery na Fanisana, ary ny Deoterônômia na Deoterônômy) dia avy amin' ny loharano efatra samihafa, dia ny tahirin-kevitra iahvista, ny tahirin-kevitra elohista, ny tahirin-kevitra deoteronomista ary ny tahirin-kevitry ny mpisorona. Izany petra-kevitra izany dia naraiki-drafitra tamin'ny taonjato faha-19 tamin'ny alalan'ny asan'ireo Alemàna atao hoe Karl Heinrich Graf (1815-1869) sy Julius Wellhausen (18844-1918) ka nomena anarana hoe "Lamin'kevitra Graf-Wellhausen". Izany petra-kevitra izany dia mitsipaka ny fandraisana ara-bakiteny ny fitenenanana hoe "Boky dimin' i Mosesy" na "Boky dimin' i Môizy".
Tsy io anefa no petra-kevitra voalohany atao hoe "ara-tahirin-kevitra" fa nisy nialoha azy, dia ny an' i Henning Bernhard Witter (1683-1715) sy ny an'i Jean Astruc (1684-1766) ary ny an' i Edouard Reuss (1804-1891).
Ny petra-kevirtr' i Graf sy Wellhausen no nanjaka teo amin' ny sehatry ny fanaovana hevitenin' ny Baiboly nefa nifarana tamin' ny taona 1970 izany vokatry ny fitsikerana nataon' ny mpikaroka maro azy io na dia mbola misy ny miaro azy. Tsy misy anefa petra-kevitra mandresy lahatra ny besinimaro nisolo azy. Ny fikarohana ankehitriny dia miankina amin' ny toetran' ny lahatsoratra sy ny fotoana heverina fa mety nanakambanana azy ka manome tombony ireto petra-kevitra roa ireto, dia ny "Petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra", izay manohana ny fandraiketana ny endriky ny lovantsofina maro samihafa tamin' ny fotoana samihafa; sy ny "Petra-kevitry ny fameno", izay milaza fa nisy lahatsoratra roa niaingana izay niharam-panamboarana isankarazany. Ny fikarohana ankehitriny dia manavaka vondrom-pampandriana an-tsoratra roa: dia ny vondrona deoterônômista sy ny vondron' ny mpisorona.
1.2 Ny taorian' ny petra-kevitr' i Jean Astruc
2.2.2 Ny tahirin-kevitra elôhista
2.2.3 Ny tahirin-kevitra deoterônômista
2.3 Ny filaharana ara-potoan' ny fisehoan' ireo tahirin-kevitra
3 Fitohizan' ilay petra-kevitra
4 Fitsikerana sy fandaozana an' ilay petra-kevitra
Nanomboka tamin' ny taonjato faha-16 dia maro ireo mpanoratra izay nametra-kevitra fa ny Pentateoka (na Torah) dia soratr' olona maro. Isan'i reo mpametra-kevitra ireo i Karlstadt tamin' ny taona 1520 sy i Hobbes tamin' ny taona 1651 ary i Spinoza tamin' ny taona 1670.
Ho an' i Spinoza, ao amin' ny boky nosoratany (Tractatus theologico-politicus, 1670), dia milaza fa tarika iray miaraka amin' ireo boky ara-tantara (ny Bokin' i Josoa sy ny Boky faharoan' ny Mpanjaka) ny Petateoka ka tsy azo heverina ho voasoratra talohan' ny fiafaran' ny Fanjakan' i Jodà izay tantaraina ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka. Ny mpanao tsikera hafa dia sahalahana amin' izany ka isan' izany i Richard Simon (Histoire critique du Vieux Testament,1678) sy i Henning Bernhard Witter ary i Jean Astruc (Conjectures sur les mémoires originaux dont il paraoit que Moyse s'est servi pour composer le Livre de la Genèse, 1753).
Ho an' ireo mpanoratra ireo dia tokony ho hazavaina ny fisian' ny teny na andian-teny na tantara na fanazavana miverina indroa na imbetsaka, sy ny fifanoherana anatiny, ary ny fahatapahan' ny fitantarana ao amin' ny lahatsoratry ny Baiboly. Toherin' ny ankamaroan' izy ireo ny filazana fa i Mosesy (na Môizy) irery ihany no nanoratra ny Pentateoka, nefa tsy izany no hevitr' i Astruc izay nanoratra mba hanohanany ny filazana an' i Mosesy ho hany mpanoratra ny Pentateoka. Aminy dia nampiasa loharano roa i Mosesy, dia ny "tahirim-pahatsiarovana A" izay iantsoana an' Andriamanitra hoe Elohim sady manomboka ao amin' ny Genesisy toko voalohany, sy ny "tahirim-pahatsiarovana B" izay iantsoana an' Andriamanitra hoe IHWH sady manomboka amin' ny Genesisy 2.41.
Io fiantsoana an' Andriamanitra amin' ny anarana roa ao amin' ny Pentateoka io dia ivon' ny petrak' olana momba ny Pentateoka. Io no ifaharan' ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra, izay niteraka ady hevitra lehibe eo amin' ny samy mpikaroka tamin' ireo taona 1960 sy ireo taona 1970;
Ny taorian' ny petra-kevitr' i Jean Astruc[hanova | hanova ny fango]
Ny mpanao hevi-teny tamin' ny taonjato faha-19 dia nandray hevitra avy ao amin' ny bokin' i Astruc (Conjecture), nefa tsy nikendry ny hiaro ny hevitra ara-dovantsofina, ka namolavola modely misava fotoana (ara-tantara) afaka anazavana ny fisian' ny loharano mahaleo tena ao amin' ny Pentateoka, izay nampandrina an-tsoratra tamin' ny vanim-potoana samihafa sy niankina tamin' ny foto-kevitra samihafa. Nisy petra-kevitra roa nipoitra tamin' izany, dia ny "petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra", izay narahin' ny "petra-kevitry ny fameno". Izy ireo enefa tsy nahavaly ny fanontaniana rehetra ka lasa tsy nisy mpiraharaha firy fa voasolon' ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra novolavolain' i Reuss ary indrindra ny an' i Graf sy i Wellhausen.
Nihevitra i Edouard Reuss (1804-1891) fa avy amin' ny loharano telo na tahirin-kevitra efatra ny Pentateoka ka navahany tamin' izany ny lalàn' ny mpisorona (ny Eksodosy 25-40, ny Nomery 1-10, ny Levitikosy ary lahatsoratra vitsivitsy mitantara).
Nasehon' i Karl Heinrich Graf (1815-1869), izay mpianatr' i Édouard Reuss, fa na ny Deoterônômia na ireo bokim-paminaniana na ny bokim-pitantarana (ny Josoa hatramin' ny Mpanjaka faharoa) dia tsy mahalala ny lalàn' ny mpisorona velabelarina ao amin' ny Torah. Noho izany dia tokony ho nosoratana taorian' ny fotoan' ny Fahababoana ny tahirin-kevitra misy ny lalàn' ny mpisorona. Io petra-kevitr' i Graf io, izay fantatra amin' ny anarana hoe "Lamin-kevitra Graf-Wellhausen" rehefa narafitr' i Wellhausen tsara, dia milaza fa ny famolavolana ny fanoratana ny Tanakh dia vokatry ny lovantsofina teôlôjika taloha sady nanomboka talohan' ny fahamarinan-toeran' ny fivavahana amin' Andriamanitra tokana (mônôteisma) teo amin' ireo Hebreo. Io petra-kevitra io dia mametraka mialoha ny fisian' ny tahirin-kevitra efatra mifampiditra na mifinaingina ao amin' ny Torah araka ny endrika ahalalana azy amin' izao fotoana izao.
Araka ny petra-kevitr' i Wellhausen dia avy amin' ny fanakambanana ny tahirin-kevitra efatra voasoratra tamin' ny fomba tsy miankina sady naely araka izany endriny izany ny Pentateoka. Asa-soratr' olon-tokana na maro, izay avy amin' ny loharano voasoratra na lovantsofina am-bava, ny tsirairay amin' ireo tahirin-kevitra ireo. Ireo tahirin-kevitra efatra ireo dia ahitana taratra ny fivoaran' ny finoan' ireo izay nampandry azy an-tsoratra raha ampitahaina amin' ny mpialoha lalana azy ireo. Ireto ireo tahirin-kevitra ao amin' ny petra-kevitr' i Wellhausen ireo: ny tahirin-kevitra iahvista, ny tahirin-kevitra elôhista, ny tahirin-kevitra deoterônômista ary ny tahirin-kevitry ny mpisorona.
Ny tahirin-kevitra iahvista (hafohezina amin' ny litera J, araka ny teny alemàna hoe Jahvist), izay avy amin' ny anarana iantsoana ny Andriamanitr' i Israely hoe IHWH (na JHWH). Ny fandraiketana azy (na am-bava na an-tsoratra) dia natao tao Jerosalema tamin' ny taonjato faha-10 tal. J.K. nandritra ny fanapahan' i Sôlômôna.
Ny tahirin-kevitra elôhista[hanova | hanova ny fango]
Ny tahirin-kevitra elôhista (hafohezina amin' ny litera E, araka ny anarana iantsoana ny Andriamanitr' i Israely hoe Elohim). Voaraikitra tao amin' ny Fanjakan' i Israely avaratra tamin' ny tapany farany amin' ny taonjato faha-9 tal. J.K. na tamin' ny taonjato faha-7 tal J.K..
Ny tahirin-kevitra deoterônômista[hanova | hanova ny fango]
Ny tahirin-kevitra deoterônômista na tantara deoterônômista (hafohezina amin' ny litera D), dia nosoratan' ny mpanao lalàna tao Jerosalema tamin' ny fanjakan' i Josia tamin' ny faran' ny taonjato faha-7 tal J.K..
Ny tahirin-kevitry ny mpisorona (hefohezina amin' ny litera hoe P, avy amin' ny teny elamàna Priestercodex na Priesterschrift), izay voasoratry ny mpisoron' i Jerosalema nandritra ny Fahababoana tany Babilôna (582-538 tal. J.K.) hatramin' ny taonjato faha-6 tal. J.K..
Ny filaharana ara-potoan' ny fisehoan' ireo tahirin-kevitra[hanova | hanova ny fango]
Araka ny petra-kevitr' i Welhausen dia nosoratana voalohany ny tahirin-kevitra J, avy eo ny E tonga tao Jerosalema taorian' ny faharavan'ny tananan' i Samaria tamin' ny taona 722. Natambatra tamin' ny J izy ka nanome ny tahirin-kevitra JE. Ny filaharana omen' i Wellhausen dia izao: J, E, D, P. Napetrak' i Welhausen any aoriana indrindra amin' ny vanimpotoan' ny Fahababoana tany Babilôna na tamin' ny vanim-potoana persiana ny P, satria ny lalàn' ny fisoronana dia tsy hita ao amin' ireo bokim-pitantarana sy ao amin' ny bokim-paminaniana taorian' ny Fahababoana.
Izao ny fandaharana ara-potoana nataon' i Wellhausen: ny J sy ny E, izay atambatra ho JE sady nosoratana tamin' ny vanim-potoana faha mpanjaka, avy eo ny D izay tsy inona fa ny Deoterônômia amin' ny endriny voalohany nosoratana tamin' ny faran' ny taonjato faha-7 tal. J.K., ary farany ny P izay ahitana ny fombam-pivavahana sy ny lalàn' ny mpisoronana.
Ho an' i Wellhausen, ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra dia mitaky filaharana ara-potoana izay tsy afa-misaraka amin' ny fivoaranan' ny fivavahan' ny Hebreo. Izany dia vokatry ny fandinihany ireo andrim-pivavahana dimy, dia ny toerana fanaovana fanompoam-pivavahana, ny sorona, ny firavoravoana, ny mpitondra fivavahana ary ny ampahafolon-karena. Nanatsoa-kevitra izy fa ireo andry ireo dia manaraka zotra izay miantomboka amin' ny fahamaroan' ny endri-pivavahana avy any amboalohany, narakarahin' ny fanangonana izany amin' ny fahefana tokana ary niafara tamin' ny famadihana izany ho fombam-pivavahana, ka izany dia nahatonga an' i Welhausen hihevitra fa tsy niandohan' i Israely tany aloha ny Lalàna na ny Penteteoka, fa nanjary fototry ny jodaisma nanomboka tamin' ny vanimpotoana aorian' ny Fahababoana, araka ny amintinan' i Thomas Römer azy.
Naneho fankasitrahana kokoa ny vanimpotoan' ny fanjakana tokana, izany hoe ny mifanandrify amin' ny JE, i Wellhausen. Vokatry ny romantisma alemàna izany, nefa ny fitiavany ny Kaiser dia isan' ny mandray anjara amin' izany safidiny izany; ka tamin' ny lahateny nataony teo anatrehan' i Guillaume I dia nampitaha ny fahaterahan' ny fanjakana tokan' i Israely sy ny Empira alemàna izay natambatr' i Bismark izy. Izany no nahatonga azy hanome lanja be loatra ny vanimpotoan' ny mpanjaka sy hihevitra ny tohin' ny tantaran' ny Jiosy ho fizorana mankany amin' ny fiharatsiana izay nitarika ho amin' ny fianteherana loatra amin' ny fombafombam-pivavahana sy amin' ny lalàna, indrindra tamin' ny vanimpotoana aorian' ny Fahababoana.
Fitohizan' ilay petra-kevitra[hanova | hanova ny fango]
Niteraka adihevitra ny petra-kevitra Graf-Wellhausen, ka isan' izany ny fiavian' ny tahirin-kevitra efatra: ny mpanoratra azy ireo ve no namorona azy sa mpampandry an-tsoratra na mpanangona fotsiny izy iréo? Ireo fanonataniana ireo dia nahatonga ny fivoaran' ilay petra-kevitra, indrindra teo amin' ny asan' i Hermann Gunkel (1862-1932). Nisy fiantraikany ny sekolin' ny tantaran' ny fivavahana sy ny fandrosoan' ny arkeôlôjia mesôpôtamiana sy asiriana (tamin' io vanimpotoana io no nahitana ny Tantaran' i Gilgamesa sy nandikana azy amin' ny fiteny hafa), ny Genesisy, izay nahavitan' i Gunkel fivoasana malaza, dia ataon' io mpanoratra io ho fanangonana angano na fedrà izay niforona miandalana avy amin' ny fitantarana samy mahaleo tena nefa nifameno tsikelikely sy mety nitambatra tamin' ny lovantsofina am-bava. I Gunkel koa dia heverina ho mpanorina ny sekolin' ny tantaran' ny endri-dahatsoratra izay milaza fa ny endriky ny lahatsoratra iray dia ahitana taratra ny fifandraisana sy ny fiarahamonina nipoiran' ilay lahatsoratra.
I Martin Noth (1902-1968) dia nametra-panonataniana ny amin' ny boky voakasik' ireo loharano ireo: Pentateoka ("boky dimy") sa Heksateoka ("boky enina") sa Tetrateoka ("boky efatra")?
Nanao petra-kevitra i Noth fa ny Pentateoka dia vokatry ny fikambanana miandalan' ny lahatsoratra maro tsy mifampiakina izay voasokajy ara-dohahevitra fa tsy famerenam-panoratana ireo lafika samihafan' ny Pentateoka heverina ho voalohany indrindra.
I Noth koa no tompon' ilay petra-kevitra momba ny fisian' ny "lovatsofina deoterônômika" izay milaza fa nisy mpanao tantara iray izay nomeny anarana hoe Deoterônômista izay nanoratra ny "tantaran' i Israely" avy tamin' ny tahirin-kevitra nananany sy avy amin' ny sombintsombin' ny Bokin' i Josoa sy ny Bokin' ny Mpitsara ary ny Bokin' ny Mpanjaka sy i Jodà.
Ao amin' ny asa soratr' i Gerhard von Rad (1901-1971) dia tonga tamin' ny endriny kanônika ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra, dia ilay manazava tsara kokoa ny fiforonan' ny Pentateoka, hatramin' ireo taona 1970. Araka an' i Von Rad dia Heksateoka ("boky enina"), raha ny tena marina, ny Pentateoka raha ny firafiny no dinihina, satria ao ny Iahvista no mametraka ny tantaram-pamonjena izay mianga amin' ny fiekem-pinoana kely voalohany ao amin' ny Deoterônômia (Deo. 26.5-9).
Mihevitra ny Iahvista fa ny fanjakan' i Sôlômôna dia fahatanterahan' ny fampanantenana sy fikasan' i Iahveh resahina ao amin' ny Genesisy (Gen. 12.1-3).
Ny "Anarana Lehibe" araka ny Genesisy (Gen. 12.2) dia ilay nomena an' i Davida araka ny Boky faharoan' i Samoela (2Sam. 7.9).
Ny firehan-kevitry ny Iahvista dia manao ny fampanantenana nomena an' i Abrahama ny amin' ny "Firenena Lehibe", ho fitahiana sy fahazoana ny tany araka ny nahatanterahany teo amin' ny fanapahan' i Sôlômôna.
Nihevitra i Von Rad fa ilaina ny fanaovana fikarohana mitovy amin' ny nataony mikasika ireo loharano hafa. Manakaiky ny teôlôjia dialektika niharan' ny asan' i Karl Barth ny hevitra ankapoben' ny asan' i Von Rad.
Tamin' ireo fotoana manodidina ny taona 1960 dia niseho amin' ny endrika hafa tsy tahaka azy tamin' ny fiandohany ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra fa sahala amin' izao:
Loharano Fotoana Andalana voakasika Lahatsoratra misongadina Teôlôjia
J 930 (vanimpotoan’i Solomona) Gen. 2.4 – Josoa 24 Gen.12.1-3. Eks 19.3 sy snm. Fanamarinana ny fanjakan’ i Davida; manatanteraka ny fampanantenany sady miaraka amin’ ny olona Andriamanitra.
E 850-750 Gen. 15 – ? (iadian-kevitra) Gen. 20 – 22 Ny tahotra an’ Andriamanitra dia mitarika amin’ ny fitodran-tena mendrika. Manakaiky ny bokin’ ny mpaminany io tahirin-kevitra io.
D 750-620 Deo. 5 – 30 Deo.6. 4-3 Teôlôjian’ ny Fanekem-pihavanana; teôlôjian’ ny Andriamanitra tokana
P 550 Gen. 1 – Deo. 34 /Josoa Gen .1, Gen. 17, Eks.6 Fiandrianana sy fahamasinan’ i Iahveh; lanjan’ ny andrim-pivavahana; fanelanelanan’ ny mpisorona.
Fitsikerana sy fandaozana an' ilay petra-kevitra[hanova | hanova ny fango]
Na dia misy ireo fiangonana fondamentalista manohitra ny lamin-kevitra Gaf-Wellhausen dia nanjaka io petra-kevitra io hatramin' ny taona 1970.
Nanohitra ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra ny fikarohana maro nivoaka tamin' ny taona 1975, ka nampiharihary ny fiarahana sy ny fitovizam-potoa-nisehoan' ny fiheverana sy sekoly, ny mampiavaka ny Pentateoka (tsy manazava ny anton' ny nizaràna ny Pentateoka ho boky dimy io petra-kevitra io), ny tsy fisian' ny famerenana amin' ny tokony ho izy ny loharano elôhista. Nanome lanja indray ny "Petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra" ireto boky manaraka ireto:
John Van Seters, Abraham in Tradition and History, New Haven/Londres 1975 ("I Abrahama ao amin' ny lovantsofina sy ny tantara").
Rolf Rendtorff, Das überlieferungsgechichtliche Problem des Pentateuch Berlin, 1975 ("Ny olan' ny fampitana ny lovantsofin' ny Pentateoka").
Ho an'ireto mpanoratra ireto dia tsy ampy ny vokatry ny fitsikerana ara-kaisoratra sy ny fahalalantsika ny Andro Taloha ka tsy azo antoka ny petra-kevitra ho enti-manazava amin' ny fomba feno ny nampandriana an-tsoratra ny lahatsoratry ny Baiboly. Na dia maro ireo fahasamihafana mampiavaka ireo asa ireo, dia miteraka firodanan' ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra izany ka manokatra lalana mankamin' ny fiaraha-monin' ny fomba fiasa tsy ahitana izay mahangona ny ankabeazan' ny fikarohana.
Navelan' ny mpikaroka maro ny fiheverana ny fisian' ny tahirin-kevitra efatra tsy mifampiakina sy niara-nampiasaina. Na dia izany aza, ny ampahany amin' io petra-kevitra io dia mbola eken' ny maro: fanavahana ny soratry ny mpisorona amin' ny soratra tsy an' ny mpisorona, ny sata manokan' ny Bokin'ny Deoterônômia, ny lanjan' ny asa fampandriana an-tsoratra eo amin' ny fanambarana ireo vondron-kaisoratra samihafa, tsy fisian' ny lahatsoratra voarakitra talohan' ny vanimpotoana persiana.
Nanomboka tamin' ny taonjato faha-20 dia niara-niasa ny "petra-kevitry ny loharano roa" izay heverina fa tamin' ny vanimpotoan' ny Fahababoana, izay petra-kevitra atao hoe "fanakambanana sy fifanoherana" satria mitaky fifamaliana isehoan-tsy fifanarahana izany, izay niseho tamin' ny vanimpotoan' ny Fahababoana ihany koa, teo amin' ny vondrona (sekoly) roa, deoterônômika (D) sy an' ny mpisorona (P), ary ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra nahazatra. Manankina ny fisiany amin' ny toetran' ny lahatsoratra sy ny fotoana mety nanoratana azy ny fikarohana ankehitriny ka mamolavola petra-kevitra roa hafa: andaniny ny "Petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra", izay mitaky ny fandrindrana ny lovantsofina samihafa niseho tamin' ny fotoana samihafa; ankilany ny "Petra-kevitry ny fameno" izay milaza fa nisy lahatsoratra maro voalohany izay niharam-piovana na fandrindrana. Io petra-kevitra io dia manavaka vondrom-pampandriana an-tsoratra roa: ny vondrona deoterônômista sy ny vondron' ny mpisorona.
Tamin' ireo taona 2000 dia nipoitra ny "petra-kevitra ara-tahirin-kevitra vaovao" (anglisy: neo-documentary hypothesis) izay ivondronan' ny mpikarona Amerikana sy Israeliana toa an' i Baruch Schwartz sy i Joel S. Baden.
Fizaràn' ny Testamenta Taloha:
↑ 13,0 13,1 et 13,2 Thomas Römer, "L'exégèse et l'air du temps Archived Mey 30, 2015 at the Wayback Machine" [tahiry], Théolib 16, 2001.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Petra-kevitra_ara-tahirin-kevitra&oldid=1039614"
Voaova farany tamin'ny 5 Novambra 2021 amin'ny 09:08 ity pejy ity.